Amụma Nzuzo Weebụsaịtị »Nbanye Mahadum Hodges
Daalụ maka ịga na weebụsaịtị Hodges. Mahadum Hodges na-agbaso iwu na ụkpụrụ niile dị ka Iwu Florida, US Federal laws, na General Data Protection Regulation (GDPR) chọrọ. Enwere ike ịchọta Mahadum Hodges n'ịntanetị na www.hodges.edu. Anyị nwekwara ebe mposi na Fort Myers: 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, FL 33966.
Ebe nrụọrụ anyị nwere usoro nchebe iji chebe ọnwụ, ojiji, na / ma ọ bụ mgbanwe nke ozi n'ime njikwa anyị. Anyị na-agbasi mbọ ike itinye nchebe anụ ahụ, kọmputa, yana njikwa iji chekwaa ozi anyị na-anakọta na ntanetị. Agbanyeghị, iwu nzuzo nke weebụsaịtị Hodges abụghị nke a ga-ewere dị ka nkwekọrịta nkwekọrịta.
Anyị na-anakọta data sitere na afọ ofufo gbasara ndị ọbịa webụsaịtị anyị site na ịmepụta akaụntụ, ngwa, na ụdị kọntaktị etinyere na saịtị a.
Na mgbakwunye, anyị na-eji data nsuso weebụsaịtị iji nye ahụmịhe onye ọrụ kachasị mma. Anyị na-ejikwa kuki na weebụsaịtị anyị iji duzie ma dozie ozi dabere na ụzọ ntinye gị na saịtị ahụ. Saịtị a na-anakọta ozi gbasara ndị ọbịa na ndị ọbịa dịka ịntanetị na adreesị ịntanetị nke kọmputa ị na-eji site na iji ngwa ọrụ nchịkọta weebụ na ngwaọrụ nyocha. Ozi anakọtara bụ maka iji ya mee ihe naanị iji kwado ntinye aha ụmụ akwụkwọ, zaghachi ajụjụ ndị ọbịa na webụsaịtị, yana nyocha weebụsaịtị.
Ọ bụrụ na ị kwuo ihe ọ bụla na weebụsaịtị anyị, ị na-eji aka gị enyefee adreesị email gị na ozi ndị ọzọ. A ga-eji ozi a biputere nkọwa gị na saịtị anyị dịka o si eji ya oge niile. Y’oburu n’acho iwepu ihe omuma gi, biko jua iwepu site na iziga email@@dges.edu. Anyị agaghị ere ma ọ bụ gosipụta ozi gị na ndị ọzọ. Mahadum Hodges kwekọrọ na iwu mpaghara, steeti, na gọọmentị etiti na-achịkwa nchịkọta na ịchekwa ozi nkeonwe. Nwere ike ịpụ na atụmatụ Mgbasa Ozi Google Analytics site na Ntọala Mgbasa Ozi Google, Ntọala Mgbasa maka ngwa mkpanaka, ma ọ bụ ụzọ ọ bụla ọzọ dị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwepụ nsuso ebe nrụọrụ weebụ, biko gbanwee ntọala na ihe nchọgharị gị iji gbochie nsuso.
Ejikọtara njikọ nke ihe ndị dị n'Internetntanet na mpụga, gụnyere weebụsaịtị, maka naanị ebumnuche ozi; ha abughi nkwado ma ọ bụ nkwado nke Mahadum Hodges nke ngwaahịa, ọrụ, ma ọ bụ echiche nke ụlọ ọrụ, nzukọ, ma ọ bụ mmadụ ọ bụla. Mahadum Hodges enweghị ibu ọrụ maka izi ezi, iwu, ma ọ bụ ọdịnaya nke saịtị mpụga ma ọ bụ maka njikọ njikọ ndị ọzọ. Kpọtụrụ saịtị dị na mpụga maka azịza nye ajụjụ gbasara ọdịnaya ya.
A na-enye ozi niile dị na weebụsaịtị anyị maka naanị ebumnuche. Hodges anaghị atụ aro ka ọrụ baara gị uru site n'iji weebụsaịtị anyị. A na - ejide Hodges na - enweghị nsogbu site na nsogbu ọ bụla nwere ike ibili dabere na ozi achọtara na weebụsaịtị anyị.
Anyị website nwere ike na-emelite n'oge ọ bụla. Enwere ike gbanwee ma ọ bụ gbanwee mmemme mmemme anyị na mmemme enyemaka ego n'oge ọ bụla na enweghị ọkwa ọkwa ọ bụla.
Na mkpokọta, weebụsaịtị Hodges bụ maka ndị okenye, ọ gwụla ma akpọrọ ya aha ụmụaka. Hodges adịghị ama ụma na-anakọta ozi nkeonwe n'aka ụmụaka na-erubeghị afọ 13. Ọ bụrụ na anyị amata na anyị anakọtara Ozi Nkeonwe nke nwatakịrị nọ n'okpuru afọ 13 nke eweghị nye anyị afọ ofufo, anyị ga-ehichapụ data ahụ na sistemụ anyị.
Ihe omuma niile di na weebụsaịtị a bu ndi nwebisiinka n'okpuru akwukwo ikike nke 1976. Igaghi eji ihe obula tinyere, ma o bughi na onyonyo, data ngalaba, ma obu logo n’enweghi ikike site na Mahadum Hodges.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nọ n'ime EU ma gị na Hodges na-emekọrịta ihe n'ihe ngosi nke ọkwa a, GDPR na-enye ikike ndị a. Iji gosipụta ikike ndị a, biko kpọtụrụ onye na-ahụ maka nchekwa data anyị na Gloria Wrenn, jobs@hodges.edu..
Gwa ya - nchịkọta na ojiji nke data gị kọwara n'ime ebe a;
Rịọ ka ịnweta ma ọ bụ mezie data na-ezighi ezi nke onwe gị gbasara gị;
Rịọ ka ehichapụ data nkeonwe mgbe ọ na-adịkwaghị mkpa ma ọ bụ ọ bụrụ na nhazi ya ezighi ezi;
Obme ihe na nhazi nke data onwe onye maka ebumnuche ahia ma obu na ihe metutara onodu ha;
Rịọ mmachi nke nhazi nke data onwe gị n'ọnọdụ ụfọdụ;
Nweta data nkeonwe gị ('data portability');
Rịọ ka ị ghara ịdabere na mkpebi dabere na nhazi nke data onwe onye, ​​gụnyere nyocha.
A ga-ahazi data nkeonwe naanị mgbe iwu kwere ka nke a mee. N'ọnọdụ ụfọdụ, Hodges nwere ike ịnye ozi ndị ọzọ gbasara ọrụ nhazi ya na mgbakwunye ya ma ọ bụ ọkwa dị iche. Ọtụtụ mgbe, Hodges ga-edozi data nkeonwe n'ọnọdụ ndị a:
Ebe I nyere anyi nkwenye gi.
Iji mezuo ọrụ Hodges nyere gị dị ka akụkụ nke ọrụ gị ma ọ bụ debanye aha gị.
Ebe Hodges kwesiri irube isi na iwu (dika imaatu ma obu mgbochi nke mpu na iwu gbasara ego).
Ebe ọ dị mkpa maka ọdịmma ziri ezi nke Hodges (ma ọ bụ nke ndị ọzọ) yana ọdịmma gị na ikike ndị bụ isi anaghị egbochi ọdịmma ndị ahụ.
Iji kpuchido ọdịmma dị mkpa nke isiokwu data ma ọ bụ nke onye ọzọ (dịka ọmụmaatụ, n'ihe banyere ọnọdụ ahụike mberede).
Iji rụọ ọrụ e mere maka ọdịmma ọha na eze ma ọ bụ ikike nke ikike e nyere anyị.
Dị ka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ America dị elu, nhazi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ data onwe onye nke Hodges ga-ewere ọnọdụ na United States. Ndị ọbịa na webụsaịtị a kwenyere na data nkeonwe enyere ma ọ bụ anakọtara site na weebụsaịtị ya ga-ebufe ya na United States, yana ịga n'ihu na-eji weebụsaịtị dị otú ahụ, ị ​​kwenyere nnyefe a.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara atumatu anyị gbasara usoro ojiji gị, biko kpọtụrụ anyị na adreesị ozi-e adresị a bụ@doded.edu.